You searched for - Page3of 33 - Chelmo News Portal
Home›Search Results for "" (Page 3)
KBS2 ရဲ့ ‘Problem Child in House’ မှာ Guest အဖြစ် ပါဝင်သွားမဲ့ Song Ji Hyo
Song Ji Hyo ဟာ Apr 20 ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်မဲ့ KBS2 ရဲ့ ‘Problem Child in House’အပိုင်းသစ်မှာ guest အဖြစ် ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းကတော့ Kim Jong Kook က ပုံသေ MC အဖြစ် တာဝန်ယူပြီး ...
Still Life နဲ့ Billboard Global Chart 200 မှာ Top 10 ဝင်ခဲ့တဲ့ BIGBANG
BIGBANG ဟာ ဒီတစ်ပတ်အတွက် အဓိက Billboard Chart တွေမှာ သူတို့ရဲ့သီချင်းသစ် ‘Still Life’ နဲ့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ‘Still Life’ ဟာ Billboard Global 200 chart ရဲ့ No.9နေရာမှာရှိနေခဲ့ပြီး ဒါဟာ Blackpink နဲ့ ...
ဆံပင္အေရာင္သစ္နဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြကို surprise တုိက္လုိက္တဲ့ Jennie
Jennie က IG မွာ ‘Dont talk to me or my new hair 🧡’ ဆိုတဲ့ caption နဲ့ ပံုေလးေတြ တင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဘလင့္ခုေတြအပါဝင္ ပရိတ္သတ္ေတြကေတာ့ မင္းနဲ့ အရမ္းလုိက္တာပဲ၊ ဆံပင္အေရာင္အသစ္နဲ့ျမင္ရတာ အရမ္းမုိက္တယ္ ဆုိျပီး မွတ္ခ်က္ေတြ ...
Crash Landing On You စာရေးဆရာရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်အတွက် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့တဲ့ IU
အသံချိုချို နဲ့ ကြည်လင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုကို တခဲနက်ရရှိပြီးသား ဖြစ်တဲ့ IU ဟာဆိုရင်တော့ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Crash Landing On You “ဇာတ်လမ်းတွဲ ဇာတ်ညွှန်းရေး ဆရာဆီက ဇာတ်လမ်းတွဲသစ်အတွက် မင်းသမီးနေရာ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိခဲ့ပေမဲ့ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်